Apple TV တွင်မီနူးများ၏ပြသမှုကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်ရမည်နည်း ငါက Mac ပါ
Apple TV မှာ menu display ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ
Ignatius ခန်းမ | | Apple က TV ကို, လဲ tutorial
Apple သည် ၄ ​​င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုဒီဇိုင်းဆွဲသည့်အခါအထူးဂရုပြုခဲ့သည်။ iPhone သို့မဟုတ် iPad ၏ Accessibility menu ကိုသွားပြီးတည်းဖြတ်နိုင်သည့် setting များကိုတွေ့နိုင်သည် အမြင်အာရုံ၊ အကြားအာရုံနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်သုံးစွဲသူများ။ ဤချိန်ညှိမှုအမျိုးအစားများကိုအနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအား Apple TV သို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။
Siri Remote အသစ်ကြောင့် Apple TV ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းသည်အလွန်လွယ်ကူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင်အမြင်အာရုံပြproblemsနာအချို့ရှိလျှင်မဟုတ်ပါ ဒါမှမဟုတ်ရုပ်မြင်သံကြားဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ cursor ရှိနေတဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ ၀ တ်စားဆင်ယင်မှုကိုခွဲခြားရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ခက်ခဲသည်။
Accessibility ဆက်တင်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပိုမိုလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြင့်ရှာဖွေရန် cursor ထဲသို့ box တစ်ခုထည့်နိုင်သည် ကျနော်တို့ကရှာတွေ့ဖို့အခက်အခဲရှိပါက။ နောက်လာမည့်သင်ခန်းစာတွင်အမြင်အာရုံပြproblemsနာများရှိသူများအတွက် Apple TV ပေါ်ရှိမီနူးများ၏ပြသမှုကိုမည်သို့တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်သည်ကိုသင့်အားပြပါလိမ့်မည်။
1 Apple TV တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုလျှော့ချပါ
2 Apple TV ပေါ်ရှိ menu လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါ
Apple TV တွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုလျှော့ချပါ
ကျနော်တို့ ဦး ခေါင်း setting များကို.
ချိန်ညှိချက်များအတွင်း၊ ကိုနှိပ်ပါ ယေဘုယျ.
ယခုကျွန်ုပ်တို့သည် Accessibility ကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်တိုးမြှင့်.
ယခုကျွန်ုပ်တို့ activate လုပ်ရမည် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုလျှော့ချပါ Apple TV မီနူးများ၏နောက်ကွယ်ရှိကြည်လင်ပြတ်သားမှုများကိုလျှော့ချရန်။
Apple TV ပေါ်ရှိ menu လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါ
အတွင်း setting များကို ငါတို့သွားတယ် ယေဘုယျ.
အထွေထွေအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့က option ကိုရှာပါ အသုံးပြုနိုင်စွမ်း ငါတို့ပိတ်လိုက်တယ် လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချပါ။ ဤအရာသည်အိုင်ကွန်များ၊ ပင်မမျက်နှာပြင်တွင်ပြသထားသည့်ရုပ်ရှင် / စီးရီးရုပ်ပုံများနှင့်အခြားကိရိယာမီနူးများ၏လှုပ်ရှားမှုကိုလျှော့ချလိမ့်မည်။ ကွဲပြားသောမီနူးများကို ဖြတ်၍ သွားသောအခါယခုအချိန်တွင်မည်သည့်ကာတွန်းအမျိုးအစားကိုမျှပြလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကယ်၍ ဤရွေးချယ်မှုများသည်ကိရိယာမီနူးများ၏ပြသမှုကိုဆက်လက်တိုးတက်စေပါကကျွန်ုပ်တို့ရွေးနိုင်သည် မီနူး၏နောက်ခံအရောင်ကိုပြောင်း။ ရဲရင့်စွာသုံးခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲပါ စာသားအရင်းအမြစ်အဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ » Apple က TV ကို » Apple TV မှာ menu display ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ
Apple Watch ၏ပြိုင်ဘက်အသစ်ဖြစ်သည့် Fossil မှအီလက်ထရောနစ်နာရီ
အက်ပဲလ်သည် Faceshift ကုမ္ပဏီကိုဝယ်သည်